Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Gbara gbara n'ime Hawaii Hotel: Gunman na Kahala Hotel & Resort na Honolulu
Gbara gbara n'ime Hawaii Hotel: Gunman na Kahala Hotel & Resort na Honolulu
N'agbanyeghị COVID-19 ndị Aloha Steeti Hawaii na-enweta ọbịbịa ndị ọbịa si na US Visitors. Taa ọ bụghị naanị ndị ọbịa, mana ụjọ bịara na Honolulu.
A gbara mgbọ na Kahala Resort na Hotel dị nso na Waikiki na Island nke Oahu na US State of Hawaii
Nnukwu ndị uwe ojii nọ na-anwa ịchịkwa ọnọdụ ahụ, na-enye ndị ọbịa iwu na-enweghị ike ịpụ apụ ka ha nọrọ n'ụlọ ịgba egwu.
Ọnwụ ahụ kwụsịrị n'elekere atọ nke ụtụtụ nke onye egbe ahụ, onye ọrụ ụgbọ mmiri US Naval na-egbu onwe ya n'ime ụlọ nkwari akụ ya na Kahala Hotel na Resort.
Rorjọ na Paradaịs na Kahala nkwari akụ 5 kilomita site na Waikiki na mpaghara Diamond Head. Ulo elu oke osimiri okomoko a ma ama bu ihe ama ama.
Carsgbọ ala ndị uwe ojii Honolulu nwere ọkụ na-enwu gbaa nọ na-agba ọsọ n'okporo ụzọ H1 n'isi ụtụtụ anyasị a iji rute n'ụlọ nkwari akụ ahụ mgbe oku gbagburu 911 nke otu egbe gbara. Otu nwoke, e chere na ọ bụ ọbịa, gbara na mbara ihu ime ụlọ na-agba egbe.
O doro anya na onye agha ahụ gbochiri onwe ya n'ime ụlọ nkwari akụ na nke anọ nke ụlọ nkwari akụ ahụ. Dị ka otu akụkọ na KHON-4 si kwuo, onye egbe ahụ nwere ike ịbụ onye agha US.
Ndị uwe ojii kpọpụrụ ebe ahụ. Ekwenyere na ụfọdụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọbịa na-ekpochi n'ime ụlọ ịgba egwu.
Mgbe ndị uwe ojii rutere n’ọnụ ụlọ ya, ọ gbara ndị uwe ojii egbe. Tupu ndị uwe ojii abịarute, onye agha ahụ gbara ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ gbara egbe na-agbapụ n'ọnụ ụzọ ya.
Ihe osise ahụ bụ n'ime Rex Jakobovitz na Kahala Resort. Ọ na-ekwu, “Anọ m n'ime ụlọ ịgba egwu ahụ na ndị 100+ nọ n'okpuru mkpọchi. Otu Swat n'èzí. Ndị uwe ojii nwere égbè mgbagbu na-atụ ihu na mbara ihu, tikuo m ka m banye n'ime, n'ihi ya, emere m. Peoplefọdụ na-ebe ákwá. ”
n'ime ime ụlọ nkwari akụ.
Ndị mmanye iwu gbara ụlọ nkwari akụ ahụ gburugburu, ọ nweghịkwa akụkọ banyere mmerụ ahụ n'oge a.
Ndị njem nlegharị anya nke ụlọ si na United States na-eleta Steeti na ọnụ ọgụgụ dị elu, n'agbanyeghị na COVID-19 na-aga n'ihu.
Ndị na-eme njem nleta n'ihu Kahala Hotel & Resort
Enweghị akụkọ banyere ịnara njide, mana ọnọdụ ahụ edoghị anya.
Nke a bụ akụkọ na-emepe emepe. eTurboNews na Honolulu na-eso ma melite ma ọ bụrụ na ọnọdụ agbanwee.
Dabere na akụkọ ndị akaebe hụrụ na-atụ ndị ọbịa ụjọ. Awa ole na ole a gbachara égbè ahụ n’elekere iri nke mgbede ndị mkparita ụka ndị uwe ojii ka na-achọ ịgwa nwoke ahụ okwu. Ọnọdụ ahụ wedara site na ọnọdụ onye na-agba egbe nọ na-arụ ọrụ mgbe elekere anọ gachara.
Ọnọdụ esemokwu ahụ kwụsịrị na 3 nke ụtụtụ Sọnde na onye agha ahụ, onye ọrụ ụgbọ mmiri US Naval na-egbu onwe ya n'ime ụlọ nkwari akụ ya na Kahala Hotel na Resort.
Kahala Hotel & Resort na-elekwasị anya na ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa ya, ndị ọrụ ya, yana obodo n'etiti ọrịa Covid-19. Promiseslọ nkwari akụ ahụ na-ekwe nkwa na ebe nrụọrụ weebụ ya, na ha na-anụ ọkụ n'obi ịnapụta ọrụ okomoko nke Kahala na ọkwa ahụike na nchekwa dị elu.
More vidiyo n'ime Kahala Resort na Oahu, Hawaii mgbe akụkọ kwusịrị na otu nwoke gbara egbe na mbara ihu. Vidio gosiri SWAT na-abanye na họtel. pic.twitter.com/iRmBLxs1f8
- Anthony Quintano Foto (@AnthonyQuintano) April 11, 2021